HomeArimaha QoyskaMa Dooneysaa In Ninkaada Daacad Caano Ma Daadshe Ah Kuu Noqdo . Farsamadaan Raac .
Daacadnimada waa lacagay helisteeda adag tahay sida ay inta badan tilmaamaan haweenka , si aad u hesho daacadnimada ninkaada /naagtaada Caashaqa,com ayaa ku siineysa talooyin muhiim ah oo ku aadan arintaas.
Ixtiraam : waa tilmaamaha ugu weyn ee xoojiya kalsoonida labada lamaane , iyadoo hadii uu ninka dareemo arintaas waxa uu sameeyaa fal celis aad u wanaagsan oo aad ku heleyso daacadnimadiisa.
U muuji in aad adiga wax waliba u tahay , walaal , xaas, hooyo iyo xabiibtiisa hadaad sidaas u muujiso indhihiisa adiga mooyee meel kale kuma fiirinayo.
Qadari wax waliba oo uu dantaada u sameynayo : Waxa uu ninka dareemaa niyad jab marka uu arko dhamaan dadalaadiisa uu u sameynayo adiga iyo caruurta aysan helin wax qadarin ah , ku tix gili wax waliba xitaa hadii ay yar yihiin waayo waxa uu doonayaa farxad gilintaada.
Dhageyso : ogoow iska dhaga tirka sheekada ninka waxa ay keeneysaa in dabacsanaan ay ku timaado xariirkiina qoyska ee gabaryaheey ka dhig ninkaada in uu wax waliba kaaga muhiimsan yahay /kaaga muhiimsan tahay .
U Noqo Saaxibad : waxaa gabaryaheey xaaska ah lagula talinayaa in aad ninkaada siiso xoogaa xoriyad ah si uu u awoodo in uu soo tufo waxa laabtiisa ku jira kagaana dhigto saxibad oo ku taageer fikradihiisa.
Wax Bacrimin: mararka qaar waxaa laga yaabaa in ninka uu wax ku yiraahdo taas oo keeneysa dhibaato is faham la `aan ah ee gabaryaheey ha isku dayin in aad warkiisa wax kale kala dhex baxdo oo aad ka bacrimisato ee weydii si saraaxad ah waxa uu ula jeeday/Ula jeeday.
U Gaar Dumarka: Sidee Ula Dhaqmi Kartaa Gacaliyahaaga Xanaaqa Badan?